TIFFANY TRUMP ၏ကြောက်မက်ဖွယ်တေးဂီတတွင်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သောရက်ပ်မှာသူမတွင်နောက်ထပ်သီချင်းများစွာရှိသေးသည်ဟုဆိုသည် - သတင်း
Tiffany Trump ၏ရွားလှသောတစ်ခုတည်းတွင်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သောရက်ပ်မှာသူမတွင်နောက်ထပ်သီချင်းများစွာရှိသည်ဟုဆိုခဲ့သည်
သငျသညျဤအမသိစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ပြန် 2011 ခုနှစ် Tiffany Trump ဖြန့်ချိ တစ် ဦး ကငှက်လိုပဲ ဖြစ်ကောင်းဆယ်စုနှစ်၏အဆိုးရွားဆုံးပေါ့ပ်တစ်ခုတည်းသော။
ဒီသီချင်းဟာဒီနွေရာသီမှာရီပတ်ဘလီကန်ကွန်ဗင်းရှင်းအတွက်ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ နောက်ဆုံးကတော့ဒါဟာနောက်ဆုံးသီချင်းဖြစ်တယ်လို့ Tiffany ကကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
Vincent Logiq Pryce, ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပူးပေါင်းခဲ့သူ Antiguan ရက်ပ်ကမကြာခင်မှာပဲသူထွက်ပေါ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အခြားသီချင်းနှစ်ပုဒ်၊
ကာရစ်ဘီယံရှိသူ၏နေအိမ်မှစကားပြောသော Logiq က“ ငါတို့သီချင်းတွေထဲကနှစ်ခုပါ ၀ င်နေတယ်၊ ​​ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကဒီသီချင်းမှာတခြားအင်္ဂါရပ်တွေရဖို့မျှော်လင့်နေလို့ပဲ။ သူတို့ကမပြီးသေးဘူးလို့ငါထင်တယ်။ သူတို့ကလွှတ်ပေးရန်အဆင်သင့်မရှိကြပေ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ကိုပဲယူပြီးဖြစ်ပျက်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ Tiffany သည်ဤသီချင်းများတွင်ပါဝင်ပြီး၎င်းတို့ကို Like A Bird ကဲ့သို့တစ်ချိန်တည်းတွင်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
သူမသည် [ထိုအချိန်တွင်] ကျောင်းကိုအာရုံစူးစိုက်ခဲ့ပေမယ့်အခုသူမပြုသောအမှုဖွင့်, ငါတို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
Logiq သည် Sprite Steban Demari အမည်ရှိကာလီဖိုးနီးယားရှိ Tiffany ၏မိခင် Marla Maples (Donald Trump ၏ဒုတိယဇနီးဟောင်း) ၏သီချင်းရေးသူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဝမ်းနည်းစရာမှာသူသည်ယခုနှစ်အစောပိုင်းကကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
သို့သော် 2011 ခုနှစ်တွင်သူတို့မှတ်ချက်ပေးရန်မရရှိနိုင်ခဲ့သူ Antiguan ထုတ်လုပ်သူ Torsten နှင့်အတူ Tiffany ရဲ့ဂီတအပေါ်အတူတကွအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မနေ့ကငါ့မိန့်ခွန်းကိုကြည့်ရှုသူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ #gopconvention #RNCinCLE ဒီညကိုမျှော်လင့်နေတယ်။ ❤️ ??
Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်ညနေ ၄း၀၀ အချိန်ညနေ ၄း၀၀ တွင်တင်ခဲ့သည်
သူသည်ပထမဆုံးသီချင်းနှင့်မည်သို့ပတ်သက်မှုရှိကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပြီး Logiq က“ သူတို့က hip-hop ကျမ်းချက်ကိုလိုချင်ခဲ့တယ်။ Torsten သည်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းဖြစ်ပြီး Marla Maples ၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ သူသည်ငါ့ကိုခေါ်။ 'yo, ငါမင်းဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားချင်တယ်' ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ငါလမ်းကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးငါကြိုက်ခဲ့သည်၊ ။
Logiq ကသူသည် Antigua မှသူ၏အထောက်အပံ့ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီးသူမအမေ၏ ၂၀၁၃ အယ်လ်ဘမ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသော်လည်း Tiffany ကိုမည်သူနှင့်မျှမတွေ့ပါဟုရှင်းပြခဲ့သည် သူကနှစ် ဦး စလုံးဟာအေးမြတဲ့လူတွေပါ၊
tik Tok ရည်းစားနှင့်ရည်းစားနောက်ဆုံးမှာ
အဆိုပါရက်ပ်ကဆက်ပြောသည်: သူမနှင့်ငါ့အပြန်အလှန်သူမကအလွန်နွေးထွေးသောလူတစ် ဦး ပါပဲ။ ငါသူမ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်အီးမေးလ်များနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု - သူမကအလွန်အေးမြပါပဲ။
Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) မှဇူလိုင်လ ၄ ရက်၊ ညနေ ၁း၁၆ နာရီ PDT တွင်တင်ထားသောဓာတ်ပုံ
ဝေဖန်သူများက Tiffany ၏စံနှုန်းကိုကြင်နာစွာမဆက်ဆံခဲ့ကြပါ။ ဤတွင်သူမ၏ဂီတနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ချက်အမြန်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
• Donald Trump သမ္မတအဖြစ်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ 'ကျွန်ုပ်သည် waterboarding ထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ငရဲကိုပြန်ယူဆောင်လာသည်။ ' ဖြစ်သည်။ သူသည်သမီး Tiffany ၏ပေါ့ပ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့သည့်အခါသူသည်ရှေ့ဆက်စဉ်းစားနေသည်။
•ဤအရာသည် ၀ မ်းနည်းခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်သည်။
•ဒီခွေး cursive အတွက်သီဆိုနေသည်သူမပြောရဲ့ shit နားမလည်နိုင်!
Logiq သည်သူမ၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရပ်လျက်သံတမန်ရေးရာဖြင့်ဤသို့ပြောခဲ့သည် - သူမဟာကြီးကျယ်တဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ထင်တယ်၊ သူမနောက်အဆင့်ကိုတက်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။ ဒါကတကယ်ပဲသူမအတွက်ပါပဲ၊ ဒါပေမယ့်သူမရဲ့အသံကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊
ဘာဖြစ်လို့မြို့ပြ outfitters ဒီလောက်စျေးကြီးသည်
yeah ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့, ကထိတွေ့မှုရဖို့ပဲငါကကျနော်တို့ကန ဦး မျှော်လင့်ခဲ့သည့်လမ်းကိုချွတ်ယူမပြုခဲ့ကြောင်းအနည်းငယ်စိတ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူမနေဆဲကျောင်းကိုသွားသောကြောင့်, ငါဖွင့်ပုံပါဘဲ။
Logiq သူဒီအောက်တိုဘာလဖြန့်ချိဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းအသစ်က mixtape စီမံကိန်းကိုအပေါ်လုပ်ကိုင်မယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသည် - နှင့် Tiffany Trump လမ်းကြောင်းအပေါ်ပေါ်မှာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။
ငါရတဲ့အပေါ်လုပ်ဆောင်နေတယ်။ အဲဒီမှာငါလိုချင်တဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကသူမလက်ထောက်မန်နေဂျာကိုအီးမေးလ်ပို့ဖို့စောင့်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောနေဆဲပဲ။
Like A Bird ကဲ့သို့သောစာသားများကိုဥပမာ -
အရူးအမှုအရာကျော် Obsessin '
အောက်ကပြခန်း - ပြပွဲပြီးတဲ့နောက် Danny Zureikat ကို deckhand လုပ်လိုက်တာဘာဖြစ်သွားသလဲ။
Tab ရဲ့ Edge-o-Meter
Crown Place သို့မပြောင်းမီသင်သိထားရမည့်အရာ ၁၀ ခု
ဘယ်အချိန်မှာယောက်ျားလက်ထပ်ရန် '' မှန်ကန်သော '' အသက်အရွယ်ဖြစ်ပါသည်ထင်သလဲ
ဒီ Renault ကားအသစ်က Gay Twitter ကို meltdown ထဲပို့လိုက်ပြီ
ဤသည်စိန့် Trinian ၏သွန်း၏အထင်ကရရုပ်ရှင်ကတည်းကမှတက်ခဲ့ကြရာဖြစ်တယ်
သို့သော်အမှန်တကယ်မှာလတ်ဆတ်သောအသားသည်အမှန်တကယ် uni ဘဝနှင့်မည်မျှတူသနည်း။
GURFC ၏နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင်မိန့်ခွန်းပြောသူမှာ 'ရုပ်ဆိုးသောလိင်တူချစ်သူများကိုမွေးဖွားခြင်း' နှင့် ပတ်သက်၍ ပြက်ရယ်ပြုခဲ့သည်
El Camino ရဲ့အဆုံးသတ်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ Breaking Bad Movie